Shiinaha Qasabadaha Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Badan | Dingxing
HSS (birta xawaaraha sare leh) oo leh adkeyn sare, xirta iska caabin iyo kuleylka iska caabinta waxqabadka geedi socodka wanaagsan, xoog wanaagsan iyo adkeyn birta xawaaraha sare leh ee ay kujirto cobalt-ka ayaa leh adkeyn sare mana waayi doono adkeysideeda asalka ah 1000 ℃.
Isku xidhka dunta oo leh naqshad gaar ah, ka hor tag quudinta, dunta khafiifka ah iyo dhexroor dhexdhexaad ah
Waxyaabaha aasaasiga ah：HSS-EX
Qaxidda qashin fiican
Waxay ka hortagtaa cufnaanta cufnaanta
Hagaajinta tayada dunta
Codsiga codsiyada ballaaran, indhoolayaasha iyo godadka.
Waxay ku habboon tahay ka shaqeynta birta kaarboon yar, birta kaarboon sareysa, birta daawaha ah, naxaasta, aluminium, aluminium magnesium iyo waxyaabo kale
Dahaadhka CVD (Kiimikada Uumiga Kiimikada)
-Waxaa la adeegsadaa daahan farsamo CVD-ah oo ku habboon xirashada caabbinta leh quudin sare iyo codsiyo xawaare goyn dhexdhexaad ah oo sarreeya.
Daahan PVD (Jirka Uumiga Jirka) daahan
-Waxaa la adeegsadaa daahan farsamo PVD ah oo ku habboon codsiyada jarista quudinta hoose ee meesha adag ee adag ee adag looga baahan yahay.Ku xir codsi leh quudinta goynta hoose illaa dhexe.
Waxyaabaha Kaarboon birta S45C
Halbeegga goynta Taabashada qoto dheer 20mm, VC 10m / min
Qaboojiye Qaboojinta saliida
Gunaanad Waxyaabaha Xawaaraha Leopard waxay noqon karaan kuwo xasilloon, wax ku ool ah oo xawaare sare ku shaqeynaya Xawaaraha Xawaaraha Xawaaraha ah 204 Dalool. Shirkad Wadarta ka faaiidaysiga 159 Holes. Nolosha wax-qabad ee isla nidaamka wax-qabad ee shirkadda A ayaa kordhay in ka badan 28%.
Halbeegga goynta Taabashada qoto dheer 25mm, Vc 10m / min
Qaboojiye Biyaha lagu milmi karo
Gunaanad Xawaaraha Xawaaraha Xawaaraha Wadarta Wadarta 216 Dalool. Shirkad Wadar ahaan Taabashada 99 Hooyo. Shirkad Wadar ahaan laga faaiidaysto 159 Goobood. Nolosha waxqabadka ee isla nidaamka wax-qabad ee shirkadda A ayaa korodhay in ka badan 110%, marka loo eego shirkadda B oo korodhay in ka badan 23% .Speed Alaabta shabeelku waxay noqon karaan kuwo xasilloon, wax ku ool ah oo xawaare sare ku shaqeynaya.
Qalabka waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa sameynta caaryada, warshadaha gawaarida, qalabka tamarta dabaysha, qalabka caafimaadka iyo qalabka iyo wixii la mid ah.Waxaa loo isticmaalaa habka taabashada. Waxaa lagu dabaqi karaa waxsoosaarka waxtarka sare ee birta, birta birta ah, birta aan xarka lahayn, Alloys Copper, Aluminium Alloys, Alloys Titanium, Alloys Heat Resistant Alloys. Waxaad ku codsataa mashiinka CNC.
Macaamiil kasta wuxuu ku raaxeysan doonaa Speed ​​Leopard adeegyo xirfadeed iyo adeegyo qiime leh
-Shaabinta alaabada iyo xuduudaha
-Garista Tababarka Teknolojiyada
-Qarash dhimista iyo la talinta qorshaha hagaajinta waxtarka
Hore: Qasabadaha Wixii ahama Steel
Gelinta axdi qarameedka